Ku dhamaan Salaadiinta iyo waxgaradka Soomaalida Waqooyi-Galbeed
Ku. Dhamaan Soomaaliweyn
KU. Maamulka Hargaysa.
Ujeedo:� Codsi ka hortag dagaal sokeeyo� oo dhexmara Soomaalida Waqooyigalbeed iyo Soomaalida Ogaadeenya.
Anagoo tixraacayna warkii uu ka sheegay BBCda wasiirka Arimaha gudaha ee Maamulka Hargaysa Ismaaciil Aadan Cismaan kaasoo ahaa in� Hargaysa lagu xidhxidhay 36 nin oo looga shakisan yahay inay katirsan yihiin ONLF ee dagaalka ba'an kala soo horjeeda Itoobiya. ayaa waxaanu halkan ka soo jeedinaynaa Baaq ku aadan xidhxidhka ragaas.
Walaalayaal� guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waa dad walaala ah, waa wiil iyo abtigii, gabadh iyo Gayaankeed, gaar ahaana midka Soomaalida W/galbeed iyo Soomalida Ogaadeenya waa kuwo wadaaga xidhiidh taabanaya dhinacyo badan sida:� Dhalashada, dhaqanka, Dhaqaalaha, Ganacsiga, Ceelka iyo Daaqsinta IWM . Waana dad uu u dhaxeeyo Xuduud aan sharci ku dhisnayn oo kala dhexmarta Beer uu nin kaliya leeyahay. sida Beerta Ayaan-daran ee ku taala agagaarka magaalada Boorame, taasoo markhaati cad u ah sharcidarada xadbeenaadkaas lagu sameeyey iyo sida loo kala qaybiyey Soomaaliweyn.
Hadaba siduu sheegay Maykal Maryama markii xadkan la jeexayey oo uu ku yidhi dowladii Ingriiska" waxaad xad kala dhexdhigaysaan labo nin oo walaalo ah, Hal iyo Nirigteed, suura gala ma'aha inay kala maqnaadaan" ayaa waxaanu maanta leenahay dadka Soomaaliyeed waa saas uu Maykal Maryama sheegay oo ma kala maarmo, ee qabiil walba deegaankiisa qabiilada kale ha ku nabadgaliyo hana ku xurmeeyo. Dhaqanka Soomaalida ninka dhulkaaga jooga aduu magan kuu yahay, Magantuna waa lama taabtaan, ninkii Magantiisa bariin kariwaayana gabadhoodu gayaan ma qasho.
Ayadoo dadka Soomaaliyeed sidaas yahay ayey hadana kala leeyihiin deegaano, ku waasoo aad moodo inay ka duwanaatay magaalada Hargaysa oo maamulkeedu ka baxay xadkii Soomaalinimada,. kadib markay dhowr jeer rag Soomaaliyeed u dhiibeen Cadowga Itoobiya. iyagoo kaga raadsanaya waji iyo xidhiidh siyaasadeed, taasoon Soomaalida dhaqan iyo Caado midna u ahaan jirin.. Soomaalida waa lagu yaqaanay inay is disho. laakiin in Xabashi laysu dhiibo waa wax reer Waqooyi gaar ku ah oo inagu cusub.
Hdaba Anagoo ku hadlayna codka Soomaalida Ogaadeenya ee ku nool Koonfurta Afrika waxaanu u sheegay Maamulka Hargaysa, gaar ahaan Qabiilka Isaaqa inaanaan u duldaadanaynin inay dadkanaga ku xidhxidhaan Hargaysa, una dhiibaan Tigreega. Iyagoo ka ganacsanaya dhamaan gobaladanada, Baabuurtooda iyo dadkooduna joogaan halkaas. Waxaa kaloon idiin sheegaynaa hadii aydaan joojinin falalka foosha xun inaanu ka qaadi doono dadkiina talaabo adag oo jawaab u noqon karta midiina.
Hadaba si midaas looga hortago waxaanu kacodsanaynaa dhamaan Salaadiinta, waxgaradka iyo Cuqaasha beelahaas inay ka hortagaan falkan foosha xun ee ay wadaan maamulka Hargaysa si loo baajiyo colaad ka dhexmarta dadka Soomaaliyeed ee dariska ah. Midaasoo ah mida ay Itoobiya raadinayso Anaguna aanu mudadii hore ka war wareegaynay.
Waxaan sidookale ka codsanaynaa dhamaan dadka Soomaaliyeed meelkastooy joogaanba� inay talaabo tooda lamid ah ka qaadaan dadka ku taageersan xumaanta uu ku kacay maamulka Hargaysa.
Maamulka Jaaliyada� Soomaalida Ogaadeenya ee Wadanka Koonfur Afrika
Gudoomiyaha jaaliyada Ogaadeenya ee Koonfurta Afrika.
C/Raxmaan C/laahi Muxumad (Casharo)
Kala xiriiri email: george@dreamlandonline.co.za